Isu tese tinogona kubvumirana kuti kuvaka muviri ndeimwe yekare tsika inoitirwa mukuvandudza kutaridzika kwevanhu, kunyanya varume. Nepo munhu wese achirova chiitiko chemaitiro chakasiyana nechinodiwa, chinomiririra ndechekuti mumwe nemumwe anoda kutaridzika nani, kupisa mafuta akawandisa uye kuwedzera mamwe mhasuru. Kune vakadzi, kudzoreredzwa kwechitarisiko chechikadzi chinotarisirwa chinhu chakakosha kutarisira mushure mekuvaka muviri. Nekudaro, kuti uwane izvi, iwe unofanirwa kusarudza iyo an Anabolic Steroids (AAS) kuti uite zvaunoda.
Isu takagadzira gwara remutengi iri rizere nemazano uye mazano edu epamusoro ekukubatsira iwe kusarudza iyo yakanakisa iyo Anabolic Steroids (AAS) zvigadzirwa.
Kutengesa kupisa Steroids Raw Materials Most Yakakurumbira Inopunzika Steroids Raw Materials Yakanakisisa Oral Steroids Raw Zvigadzirwa
Testosterone Enathate / Muedzo E
Iyo mikuru yekutengesa steroid malisiki kubva kwatiri mumakore apfuura
Yekutanga uye yakanyanya kukurudzirwa jekiseni steroid
Chinyorero chakanyanya nyore uye chakachipa cheasidhiids zvinhu zvakasvibirira
Anonyatsowirirana uye anogamuchirwa zvikuru maSmsids mumusika.
Iyo inonyanya kufarirwa Tren yakagadzirirwa pakati pevatambi vekuita
Trenbolone Acetate yakasimba kupfuura Trenbolone Enanthate nekuda kweEnanthate ester inotora yakawedzera masimbi muhomwe.
Vazhinji vashandisi 'vanotanga kuenda neTrenbolone hormone nguva dzose ndeye Trenbolone Acetate.
Vatengi vanonyanya kusarudza pamuromo huwandu hwakawanda vanowana steroid
Dianabol inogona kubatsira zvakanyanya pakuvaka.
Mhedzisiro yeDianabol iri nyore kubata kana yakashandiswa chete yabviswa kana ichienzaniswa nesoftware.
Tarisa Mutengo More Details Tarisa Mutengo More Details Tarisa Mutengo More Details
Heano Heano Kumusoro 10 Akakurumbira Anabolic Steroids Raw:
Anonyanya kuzivikanwa Anabolic Steroid Mazita
Iyo inonyanya kuzivikanwa sarudzo yeiyo steroid ndeiyi:
Dianabol poda (methandrostenolone)
Deca Durabolin (nandrolone decanoate poda)
Winstrol poda (stanozolol)
Akanyanya Akabudirira Anabolic Steroid Mazita
Neye mushandisi muyero, iyo inonyanya kushanda ma-steroid ndeiyi:
Trenbolone poda (akajeka muhwina)
Hormone Yekukura Kwemunhu (HGHraw)
Kunzwisisa Mhando dzakasiyana dzeAnabolic Steroids
Iko kune mashoma mashoma akakosha ekutarisa kana uchisarudza Anabolic Steroids. Iwe unogona kutanga nekuenzanisa akasiyana ezvinangwa kuti utore iyo yakakodzera iwe pachako.
Vanhu vanosarudza mhando dzakasiyana dzakasiyana siyana:
bulking steroids yekuvaka mhasuru
kuita mashuga esimba uye kutsungirira
kutema ma-steroid ekupisa mafuta
Zvimwe zvikonzero zvekushandiswa zvinosanganisira kupora uye kupora uye kuwedzerwa kwemetabolism.
Kune zvese zvinangwa zvekurapa uye zvisiri pamutemo, AAS inogona kutorwa:
semapelleti akaisirwa pasi peganda
kuburikidza neganda kunge kirimu kana gel
Mafomu emuromo anotorwa nemuromo. Zvinosanganisira:
Mesterolone (Proviron poda)
Methandienone (Dianabol poda)
Oxandrolone (Anavar poda)
Oxymetholone (Anadrol poda)
Stanozolol (Winstrol poda)
Injectable mafomu anosanganisira:
Testosterone enanthate poda
Boldenone undecylenate raw zvinhu (Kuenzana)
Methenolone enanthate poda (Primobolan)
Nandrolone decanoate poda (Deca Durabolin)
Enzanisa neyakakurumbira Anabolic Steroids mu 2019
Product zita Teststeorne Enanthate poda Dianabol powder Trenbolone Acetate powder Anavar (Oxandrolone) poda Stanozolol powder Kukura Kwemunhu Hormone yakaomeswa Nandrolone Decanoate powder Boldenone Undecylenate mbishi Drostanolone Propionate poda Methenolone Enanthate powder
Kucheka ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆
Kubhadharira ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆
Migumisiro Yechiri ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆◆ ◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆ ◆
Yedu 10 Yakakurumbira Anabolic Steroids Ongororo
1: Testosterone poda
Testosterone ndiyo yakanyanya anabolic steroid iyo inogadzirwa chaizvo nemuviri wako zvoga. Zvino nepo iyi steroid iri pachena ichibatsira kuumba masculine mhasuru uye simba raungave uinaro, iri kuitawo humwe hunhu hwechirume hwakadai senzwi rako rakadzika uye nebvudzi rechiso. Kana ichishandiswa senge inoshanda-inowedzera mushonga, Testosterone ichabatsira kuwedzera kukura uye kusimba kwemasuru ako, kuderedza tsandanyama kukuvara, uye kuwedzera muswe kupora.
Testosterone ine anononoka-kuita refu ester
Mhando dzakajairika dzakashandiswa pasi rese nekuita zvinosimbisa vatambi
2: Trenbolone poda
Trenbolone inonyanya kutaridzirwa sekuva imwe yakasimba anabolic steroid yakambogadzirwa. Muchokwadi, yakasimba kakapetwa mashanu kupfuura testosterone nekuda kweiyo androgenic chiyero che500 kusvika 500 ichienzaniswa neiyo 100 kusvika 100. Kune vavaki vemuviri, kunyanya, iyi yakakurumbira steroid nekuda kwekuti vangakurumidza sei kurongedza mhasuru uye simba zvinowana. Izvo zvinobatsirawo izvo izvo zvinoda kupisa mafuta nekukurumidza kupfuura zvavaizongoita ivo.
Iyo pfupi-keteni-ester yeTrenbolone
Majekiseni ezuva nezuva anowanzo kurudzirwa
Izvo zvakanyanya kubatsira kune avo vanotsvaga kuwana mari nekukurumidza
3: Anavar (Oxandrolone) poda
Anavar inomiririra imwe inozivikanwa kwazvo yemuromo anabolic steroid yenguva dzese, uye izvi zvakanyanya nekuda kwehunhu hwayo hwakanyatsotsungirirwa Iyi ndeimwe yevashoma anabolic steroid iyo inogona kushandiswa zvakachengeteka nevarume nevakadzi, uye zvakare iri imwe yemativi zvakanyanya maitiro ane hushamwari. Nekudaro, mune mamwe madenderedzwa Anavar anozivikanwa zvikuru nekuda kwehunyoro hwawo, asi izvi zvinowanzoitika nekuda kwekusafungidzira kutarisira.
Inonyanya kufarirwa muromo anabolic steroid yenguva dzese
Yakakura nekuda kwehunhu hwayo hwakanyatsoshivirirwa
Iwo mashoma anabolic steroid ayo anogona kushandiswa zvakachengeteka nevarume nevakadzi
Yakanyanya kukosheswa nekuda kwehunyoro hwayo
Nandrolone Decanoate ndiyo imwe yeanonyanyo shandiswa anabolic steroid pakati pekuita basa inosimbisa vatambi. Izvo zvinozivikanwa nekuve zvinoshamisa zvinobatsira off-mwaka misa yakawanda steroid, asiwo inofarirwa mumazhinji emakwikwi madenderedzwa ayo ekurapa. Nekuda kwekubatsira kwayo kukuru pakurapa, iyo Nandrolone hormone ndiyo imwe yeanobatsira anabolic steroid mune zvekurapa.
Inonyanya kushandiswa anabolic steroid pakati pekuita basa inosimudza vatambi
Anonyatso kuzivikanwa nekuve anobatsira zvikuru anobatsira-mwaka musweji steroid
Imwe yeanobatsira anabolic steroid mune zvekurapa maitiro
5: Boldenone Undecylenate mbishi
Boldenone Undecylenate is testosterone yakatorwa anabolic androgenic steroid uye iri rakarongedzwa nenzira ye testosterone. Iko kushanduka kushoma kwazvo mune yakawedzera kaviri chisungo pane kabhoni imwe uye mbiri chinzvimbo. Iyo Undecylenate ester inobvumira kuburitswa kwepamusoro muBoldenone inenge 3-4 mazuva mushure mekukuvara, nekufamba zvishoma nezvishoma kusunungurwa kwehomoni yekutevera kwemazuva angangoita 21.
Icho chakanakisa chikamu cheiyi steroid kugona kwayo kupa simba remuviri
Sekuru veavo vese anabolic steroid
Imwe yeanonyanyovimbika steroid nehunyanzvi vatambi uye ma bodybuilders
6: Dianabol poda
Dianabol anomiririra imwe yeanonyanya kuzivikanwa uye imwe yeanonyanya kukosha anabolic steroid yenguva yose. Pasina mubvunzo, iyi ndiyo inonyanya kuzivikanwa yemuromo steroid yakamborova musika uye imwe yeanonyanya kuzivikanwa steroid mune chero chimiro. Nepo kazhinji inowanikwa sehwendefa yemuromo, Dianabol inogona kuwanikwa seanogadziriswa mhinduro, asi mahwendefa anomiririra nzira yekutanga yekutonga.
Inonyanya kukosha anabolic steroid yenguva yose
Iyo inonyanya kufarirwa yemuromo steroid yakamborova musika
Iwo anowanzokurudzirwa steroid naArnold
7: Stanozolol poda
Nepo imwe yeanonyatsozivikanwa anabolic steroid, Stanozolol inonyanya kuzivikanwa pakati pevakawanda mune iyo steroid inoshandisa huwandu hwevanhu. Iyo iri munzira dzakawanda iyo ine unyoro anabolic steroid inogona kushandiswa zvakachengeteka nevarume nevakadzi. Zvakakoshawo, yakaratidza kuve inoshanda kwazvo kune akawanda maitiro ekuvandudza mabasa.
Iyo inonyanya kuzivikanwa anabolic steroid
Iyo yakakurumbira pakati pevakawanda mune iyo steroid kushandisa huwandu
Iyo anabolic steroid iyo inogona kushandiswa zvakachengeteka nevarume nevakadzi
Yakanyanya kushanda kune akawanda mashandiro ekuwedzera mabasa anoedza
8: Kukura Kwemunhu Hormone raw
Hormone Yekukura Kwemunhu ihomoni yeprotein inogadzirwa neanterior pituitary gland. Iyo inogadzirwa nevanhu vese vapenyu vanhu, uye iri pamazamu akanyanya panguva yehujaya. HGH inomiririra imwe yeakakosha mahormone mumuviri wemunhu sezvo achibata mapfupa edu, mutsipa wechipfuva uye nhengo dzemukati, pamwe nekutamba zvinzvimbo mune dzimwe nzvimbo dzakawanda mumuviri wese.
Protein hormone inogadzirwa neanterior pituitary gland
Inonyanya kufarirwa muiyo steroid uchishandisa huwandu hwevanhu
Mahara anokosha kwazvo mumuviri wemunhu
9: Drostanolone Propionate poda
Iyo yakawanda yevese Masteron pamusika ichave Drostanolone Propionate. Drostanolone Propionate is dihydrotestosterone (DHT) inotorwa anabolic steroid. Kunyanya, Masteron ndiyo DHT mahormoni iyo yakashandurwa nenzira nekushongedzwa kwechikwata che methyl pane kabhoni 2 chinzvimbo, izvi zvinodzivirira iyo mahormoni kubva pakuputsika kwemetabolism ne3-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme, inowanikwa mune tsandanyama yemabhonzo. Iyo inowedzerawo zvikuru iyo yemahara yeanabol anabhu.
Yakanyanya ester yeDrostanolone inoshandiswa nevarume vane hunyanzvi uye vanovaka muviri
Akanyanya kunaka androgenic
Imwe yeanonyanya kuzivikanwa pakati peavo vanhu vari kukwikwidza kana kutarisa
yemuviri wakawanda wekushongedza
10: Methenolone Enanthate poda
Methenolone Enanthate inoonekwa seimwe yakachengeteka anabolic steroid pamusika uye inotakura yakanakisa yekuchengetedza chiyero kuti udzore chikumbiro ichi. Muchokwadi, iyi steroid yakashandiswa zvakabudirira kurapa vana vasingakwanisi uye vacheche vasati vambokuvara pasina kukuvara. Iyo inorayirwawo kune osteoporosis uye sarcopenia ..
Iyo inonyanya kushandiswa panguva yekucheka magetsi, apo inorema misa kuwana
A anoshanda-akareba anoita steroid
An oral anabolic steroid iyo yakasarudzika zvishoma ichienzaniswa nemazhinji anabolic steroid
Yakavimbika Anabolic Steroids Tsime rekuti Rifungirwe Usati Wakatenga
Tsvaga iyo Mhando dzakasiyana dzeSteroids
Iwe unogona nyore nyore kutenga steroids poda online uye uvaite vasingazivikanwe vaendeswa kumba kwako. Nekudaro, iwe unofanirwa kuita kumwe kutsvagudza usati waisa iyo steroid poda. Kutanga, tsvaga kana uri kuwana iyo yakakodzera steroid poda. Kana iwe uine shamwari panzvimbo yekumhanyisa iyo inoshandisa steroid poda, tsvaga kuti ndeapi avanoshandisa uye bvunza nezvezvakanakisa zvevanotanga. Iwe unogona zvakare kukumbira mazano kubva kune vamwe vavaki vemuviri pamaforamu epamhepo.
Kuverenga kuongororwa kweakasiyana-siyana e-steroid poda iwe aunogona kufarira kunobatsirawo. Kunyanya, iwe unofanirwa kuona kuti iyo maseruids poda inoshanda sei, ndeapi mhando yekudya uye zvirongwa zvekurovedza muviri zvinofamba zvakanaka navo uye izvo zvinogoneka zvinokuvadza. Kana iwe uine pre-iripo mamiriro, tsvaga zvinogoneka zvichidzika zvekushandisa chaiyo iyo steroid poda iwe yaungave mushure.
Sarudza Inotendeka Steroids Supporter
MuChina, kune makambani mazhinji ekugadzira steroid poda yekutengesa. Nekudaro, kana iwe uri kutenga steroid poda pamhepo, haungambove uine chokwadi nezve kwavakabva izvo zvekuwedzera. Kune musika mukuru wepasi pevhu weasidhiids poda kutenderera pasirese uye mazhinji epasi peLab, kunyanya kubva kuEurope, anogona kukutumira zvisiri pamutemo anabolic steroids poda. Nekuda kwehutano hwako, zvakanakisa kuraira yakabvumirwa steroid poda kubva kumakambani anozivikanwa.
Bata Nesu, Tinogona Kuita At Least
Zvigadzirwa zvedu zvakagadzirwa pasi pe cGMP uye mhando inogona kuteverwa.
Kuchena Kuvimbiswa hakuna pasi pe98%. COA; HPLC; HNMR bvunzo mashumo inogona kupihwa.
Yedu yekugovera kugona yakasimba kwazvo uye kuronga kugadzirwa kwemazhinji nguva zhinji.
Isu tine ruzivo rwehupfumi mukushandira misika yepamusoro-yekupedzisira pasi rese.
Bata pamwe nefekitari yedu zvakananga, unogona kuderedza mutengo wako.
Anabolic Steroids Raw Kutenga FAQs
Q: Sei kuisa marongero kubva kukambani yako?
1. Unogona kutitumira oda yako yekutenga pawebsite kana kune yedu email ([Email akadzivirira]), iwo makomendi anozopihwa kana tangogashira.
2.Payment doneand parcel receiver & kero yakapihwa.
3.Izvinhu zvichaendeswa neyekutevera nhamba, pikicha pikicha, nhamba yekutevera uye yakatarwa kusvika zuva.
4.Goods inogamuchira uye inopa mhinduro.
Q: Ndeipi nzira dzekubhadhara dzinogona kubvumirwa nekambani yako?
A: Bhangi Rekutumira; Western Union; MoneyGram; Bitcoin
Q: Muenzaniso Unowanikwa?
A: Ehe, Zvizhinji zvezvigadzirwa zvinogona kutumirwa semahara samples, asi pauri iwe unobhadhara kune wekutumira mutengo.
Q: How to nechokwadi chemhando chigadzirwa musati kuisa maodha?
A: COA, HPLC, HNMR iripo. Uye Mapepa Ekuyedza nekechitatu bato anopihwa nguva nenguva.
Q: Sei vimbiso yangu mari yakachengeteka?
A: Iyo mari inogona kudzoserwa zvinhu zvisati zvatumirwa kunze.
Q: Zvakadii nenguva yekuzvitakura?
A: Mukati me1 ~ 3 mazuva ekushanda mushure mekubhadhara kusimbiswa. (Zororo reChinese harina kusanganisira).
Q: Pane chero mutengo?
A: Ehe, nekuda kwehuwandu hukuru, isu tinogara tichitsigira nemitengo iri nani.
Q: Unogona kuvimbisa kugovera kuwanikwa?
A: Kugona kwedu kupa kwakasimba kwazvo uye kuronga kugadzirwa kwemazhinji nguva zhinji.